Kuthetha ukuthini ukuphupha befuna ukukubulala? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Nangona ingcinga eqhelekileyo kukuba ukuphupha bafuna ukukubulala kuthetha into embi, inyani yahlukile. Iphupha elo libonisa ukuba iingxaki zikhona ekufuneka zisonjululwe kwaye kufanelekile ukuqonda uxanduva lwakho.
Ekuqaleni, umntu ozama ukukubulala luphawu lwengxaki ezayo ekufuneka yoyisiwe. Ngapha koko, ezi ngxaki zisebenza njengendlela yokuzisa ukukhula kwaye azibonisi "ukuphela kwehlabathi."
Ukuqonda iintsingiselo, ingcebiso kukukhumbula zonke iinkcukacha kwaye kufanelekile kwiimeko eziqhelekileyo. Ke ngoko, lixesha lokuba ufumane lonke ulwazi kwaye uqonde ezona meko ziqhelekileyo.
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha befuna ukukubulala?
2 Ukuphupha ukuba bafuna ukukubulala ngemela
3 Ukuphupha ukuba umntu ufuna ukukubulala ngompu
4 Ukuphupha ngabantu abafuna ukukubulala
5 Ukuphupha ukuba bafuna ukukubulala ngompu
6 Ukuphupha umntu ongamaziyo ezama ukukubulala
7 Ukuphupha abantu ababini abafuna ukukubulala
8 Ngaba iphupha liqinisekile okanye alilunganga?
Okokuqala, amaphupha kufuneka afundwe kwaye kubalulekile ukuba abe kwindawo elungileyo yokujonga. "Ukubulala kufutshane" okukhoyo ephupheni ngumqondiso obonisa ukuba kukho uhlobo lokuzalwa ngokutsha. Kubalulekile ukuba uqonde ukuba ukuphupha bafuna ukukubulala kuthetha ukuba kuya kufuneka ukhule uneengxaki.
Ke, kulula ukubona icala elilungileyo lale meko kwaye utyekelo ayikokukhalaza ngakumbi, ukuba nesimo sengqondo esisebenzayo. Ekuboneni kokuqala, kubalulekile ukuba wazi iimeko eziqhelekileyo zeli phupha kwaye kuya kufuneka ulingane nomxholo okhoyo ephupheni.
Ke ngoko, jonga ngezantsi kwalo lonke ulwazi ukuze ube nentsingiselo yeli phupha.
Ukuphupha ukuba bafuna ukukubulala ngemela
Phendula ngokunyaniseka: ubukhe waya kugqirha rhoqo okanye kuphela xa kukho ingxaki? Ngokuqinisekileyo akunjalo, kwaye kufuneka kubekho ukhathalelo lwempilo ngakumbi kwaye ayisiyiyo eyakho kuphela. Zama ukuya kwingcali, thatha iimvavanyo, udlale imidlalo kwaye unakekele ngcono eyona asethi yakho ixabisekileyo: ngokwakho. Kungekudala emva koko, utyekelo lwendalo kukuphucula kwaye iphupha libonisa isidingo sokunikela ingqalelo kwezi nkcukacha zibalulekileyo.
Ukuphupha ukuba umntu ufuna ukukubulala ngompu
Elinye lawona manqaku abalulekileyo akhoyo kukuba ulumke nosapho lwakho kwaye iphupha elo libonisa ukunqongophala kwalo. Ngendlela efanayo, kubalulekile ukuba umntu aqale ukunxibelelana kunye nokukhangela amalungu osapho, asombulule nayiphi na imicimbi engekenziwa.
Ukuphupha ukuba bafuna ukukubulala ngompu yinto ethile yokuba kubalulekile ukuba unxibelelane nosapho kwakhona. Kubalulekile ukwazi ukuba ubomi buyakhawuleza kwaye ukuba umntu uyasweleka, uyazisola ngoqhankqalazo kwaye oko akulunganga.
Ukuphupha ngabantu abafuna ukukubulala
Ubomi benziwe ngobuhlobo bothando kwaye le meko imele ukufika kwexesha elitsha. Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba umntu omtsha uza kuvela, kuba oko kunokuthetha utshintsho kuphela.
Ukuba sele unaye umntu, luphawu lokuba iqabane lakho oluthandayo liza kuphucula unyango lwalo kwaye lube ngumntu omtsha. Kwelinye icala, ukuba akutshatanga, yenye indlela kwaye ibonisa ukufika kwezinto ezintsha ebomini bakho.
Ukuphupha ukuba bafuna ukukubulala ngompu
Indawo yakho yomsebenzi ayilunganga kwaye kubalulekile ukuba uluqonde uxanduva lwakho. Nangona kunjalo, inokusonjululwa kwaye ithatha nje umonde omncinci kwicala lakho.
Zama ukungathathi yonke into "nzima nangokukhawuleza", kuba abantu osebenza nabo bajongana neengxaki ezininzi. Zama ukukuqonda oku kwaye "sukutyhala ibar" kuba yile nto iyiphucula kakhulu imeko yeziko.
Ukuphupha umntu ongamaziyo ezama ukukubulala
Iimpawu ezintle kwaye zibonisa into oyenza rhoqo: ukhalaza kakhulu ngobomi. Ke ngoko, kubalulekile ukuqonda ukuba ukukhalaza akusombululi kwaye kunokwenza ingxaki ibe mandundu, kuba izisa ukudimazeka.
Ukuphupha befuna ukukubulala, kule meko, luphawu oluqhelekileyo lokuba kubalulekile ukuba nesimo sengqondo esitsha. Ukusombulula ingxaki, ukuba nesimo sengqondo esifanayo, phantse akunakwenzeka kwaye yiyo loo nto ingcebiso kufuneka ibe nezenzo ezahlukeneyo.
Ukuphupha abantu ababini abafuna ukukubulala
Okokuqala, yonke into el mundo Unabahlobo kwaye kufanelekile ukuba ujonge umfowunelwa, kuba kunokwenzeka ukuba bakuphose. Ndiyazi ukuba izinto zenzekile ezinokuthi zibushukumise ubuhlobo, kodwa kunyanzelekile ukuba ube nezinye izimo zengqondo. Zama ukuthetha, sondela, cela uxolelo (ukuba kukho imfuneko) kwaye uxolele (ukuba kukho imfuneko), kuba ubomi benziwe ngayo.
Ke kungcono kakhulu ukubeka ikratshi ecaleni kwaye uhlale ngolonwabo, ngaphandle kokulwa nabanye.
Imeko entle intle kwaye imele isidingo sokujonga iingxaki, kodwa ukusuka kolunye uluvo, ke, ukusombulula umba ngamnye ngendlela echanekileyo.
Akukho ndawo yokucinga ukuba "uThixo akakujonganga", kuba ezi zihloko zikhona kuphela ukuze abantu banokongezwa.
Okokugqibela, ukuphupha ukuba bafuna ukukubulala yimeko elungileyo kwaye kubonisa ukuba ungasombulula yonke into kungekudala. Emva koko, "kulungile" ukuba uphile ngokulula.